ओली-प्रचण्ड चुनावमा मिल्लान कि भिड्लान् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
समाचार विश्लेषण । राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने धारणा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा ठ्याक्कै मिल्छ । ओली कुनैबेला माओवादीको कटु आलोचक थिए । उनले प्रचण्डलाई कटाक्ष गरिरहन्थे । नेताहरुमध्ये प्रचण्डलाई सबैभन्दा बोली र व्यवहारले प्रहार गर्ने ओली नै थिए ।
ओली र प्रचण्डबीचको टकराव २०७४ सालमा मिलनका रुपमा परिणत भयो । यसलाई धेरैले आश्चर्य माने । एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धन बनाएर अगाडि बढे । चुनाव चिन्ह नै एउटै बनाएर लड्ने सम्मको कुरा भएको थियो । त्यतिसम्म नभएसम्म गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा ओली र प्रचण्ड दुवैले सफलता हासिल गरे ।
ओली र प्रचण्ड दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता थिए । तर, विचारमा धेरै मतभिन्नताहरु थिए । त्यसलाई थाती राखेर ओली र प्रचण्ड मिले । धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्दै एमाले र माओवादी एकता गरी नेकपा बनाए । दुवैले शक्ति बाँडफाँड गरे ।
आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरे । तर, ओलीको २ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि विवाद चुलिन थाल्यो । दुवै एक अर्काविरुद्ध खनिदै गर्दा नेकपा विभाजनसम्म पुग्यो । ओली र प्रचण्डबीच पानी बाराबारको अवस्था सम्म बन्यो ।
अहिले ओली प्रचण्डलाई कुनै हालतमा सिध्याउने गरी लागेको देखिन्छ । उनले चितवनबाट प्रचण्डलाई चुनाव जित्न नदिने रणनीतिहरु चालेका छन् । एमाले महाधिवेशन चितवनमै आयोजना गरी शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेका छन् । ठोरीमा राम मन्दिरको रणनीति प्रचण्डविरुद्धकै रहेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । प्रचण्डले पनि सोही आशयको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
ओली र प्रचण्ड एक अर्कालाई सिध्याउने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रचण्ड ओलीविरोधी दल र समूहलाई एकजुट बनाउन लागेका छन् । ओली पनि प्रचण्डलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा छन् । यसरी नै अगाडि बढेमा आगामी आमनिर्वाचन, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एक अर्को दललाई हराउने दुवै नेता लागेको देखिदैछ । तर, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । दुवै नेता अन्तिम समयमा मिल्न पनि सक्छन् ।
ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन देशभित्र र बाहिरको शक्ति भित्र भित्र लागेको छ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ओली र प्रचण्ड मिल्नुपर्ने सुझाव दिएकी छिन् । चीनले दुवैलाई मिलाउने प्रयास थालिसकेको छ । तर, त्यो कठिन छ असम्भव भने होइन ।
चुनावमा एमाले र माओवादी भिडेमा नतिजा उनीहरुको विपक्षमा जाने निश्चित छ । त्यो ओली र प्रचण्ड दुवैले बुझेका छन् । अहिले उनीहरु शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् । अन्तिम समयमा वाध्यतावश मिल्न पनि सक्छन् । दुवै नेता मिल्ने भन्दा भिड्नेमा लाग्ने सम्भावना बढी छ । उनीहरु नमिल्ने गरी विभाजित भएको जस्तो देखिन्छ । तर, दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली र प्रचण्ड एकले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्ने गरी बढेका छन् । यसले उनीहरु कतै नदीका दुई किनार त भएका होइनन् ? घटनाले यस्तै देखाएको छ ।